६ महिनासम्म घाँस खाएर बाँचिन् हराएकी ४७ वर्षीया महिला ! - Sidha News
६ महिनासम्म घाँस खाएर बाँचिन् हराएकी ४७ वर्षीया महिला !
अमेरिकामा ६ महिना अघि हराएकी एक महिला एउटा सानो पालमुनि जीवितै फेला परेकी छिन् । उटास्थित एक गल्छीबाट हराएकी ती ४७ वर्षीया महिला ६ महिनासम्म झारपात तथा घाँस खाएर बाँचेको बताइएको छ ।
साल्ट लेक सहरभन्दा ४० माइल दक्षिणमा पर्ने स्पेनिश फोर्क क्यान्योनबाट गत नोभेम्बरमा हराएकी थिइन् । गल्छी नजिकैको गाडी पार्किङस्थलमा उनको कार तथा क्याम्पिङका सामानहरु मात्र फेला परेका र ती महिला नभेटिएपछि उनी बेपत्ता भएको घोषणा गरिएको थियो । उटा काउन्टीस्थित प्रहरी कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा ती महिलाको खोजी कार्य गरेको थियो ।
तर ती महिलालाई फेला पार्न नसकेको र उनका आफन्तसँग पनि सम्पर्क हुन नसक्दा ती महिला कारलाई त्यहीँ छाडेर कोलोराडोतिर गएको हुनसक्ने अनुमान गर्दै उनी बेपत्ता भएको ठहर गरे । यद्यपि खोज तथा उद्धार दलले स्थल तथा हवाई माध्यमबाट समेत उनको खोजीकार्य जारी राखेको थियो । अन्ततः गत हप्ता ती महिला फेला परिन् । वास्तवमा ती महिला फेला पर्नु पनि एउटा अनौठो संयोग तथा काकताली बन्यो ।
खोजी कार्यलाई सघाउनका लागि उडाइएको ड्रोन खोँचमा खसेपछि उक्त ड्रोन खोज्दै ड्रोनका पाइलट र प्रहरी अधिकारी ड्रोन खसेको ठाउँतर्फ गए । जब उनीहरु त्यहाँ पुगे एउटा पूरानो र प्रयोग भएर छाडिसकिएको जसतो पाल टाँगिएको अवस्थामा उनीहरुले देखे । जब उनीहरु उक्त पालको नजिक पालको चेन खोलेर एक महिला त्यहाँ देखा परिन् । आखिर ती हराएकी महिला उनै थिइन् जो ६ महिनादेखि सोही पालभित्र बसेकी थिइन् ।
६ महिनासम्म त्यसरी बेवारिसे अवस्थामा निर्जन ठाउँमा पालभित्र बसेकी ती महिला निकै दुब्ली र कमजोर अवस्थामा थिइन् ।
आफू खोँचमा हराएसँगै जानीबुझीकन पालभित्र बसेको भन्दै उनले कष्टपूर्ण तरिकाले जाडोयामको चिसो कटाएको र घाँस, झारपात र नजिकैको नदीको पानी खाएर बाँचेको बताइन् । अधिकारीहरुले ती महिलाको उद्धार गरी उनको मानसिक स्वास्थ्यको जाँचका लागि अस्पताल लगे ।